Puntland oo sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan qayb ka aheyn dagaalka Tukaraq - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan qayb ka aheyn dagaalka Tukaraq
May 27, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan qayb ka aheyn dagaalka Tukaraq.
Bayaan kasoo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri: “dowladda Puntland waxay cadeynaysaa in dowladda federaalka Soomaaliya aysan qayb ka ahayn difaaca dowladda Puntland ay iskaga difaacayso gardarada qaawan ee maamulka Hargeysa kusoo qaaday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool,”
“Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wax gorgortan ah kama gelayo deegaanada dastuuriga ah ee Puntland,” ayuu bayaanka lagu sii daray.
Sidoo kale waxaa bayaanka lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan keli karin gorgortan, wadahadal, ama tanaasulaad deegaan Puntland leedahay.
Bayaanka ayaa imaanaya iyada oo maalmihii u dambeeyay maasuuliyiinta maamulka Somaliland ay ku eedeynayeen Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladda federaalka Soomaaiya in ay ka dambeyso dagaalka Tukaraq ee u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland.
Tobonaan qof oo katirsan Puntland iyo Somaliland ayaa ku geeriyooday dagaal Khamiistii ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan caafimaadka.
Dagaalka fool ka fool ka ah ee u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland ayaa si rasmi ah u bilaabmay 15-kii bishaan May.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isku shaandheyn ku sameeyay haayadaha ammaanka. Wareegto kasoo baxday Xafiiska Madaxweynaha maanta oo Khamiis ah ayaa u qorneyd sidaan: 1. Dr. Aamina Siciid Cali waxaa [...]